Male – Page2– Healthy Life Journal
အမျိုးသားကျန်းမာရေးကောင်းစေမည့် အစာ ၁၀
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) (၁) ကမာကောင် ကမာကောင်မှာ အမျိုးသားတစ်ယောက် တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့ ဇင့်(သွပ်)ဓာတ် အပြည့်အဝပါဝင်နေပါတယ်။ ဇင့်ဓာတ်က ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကို ကာကွယ်ပေးပြီး သုက်ကောင်ရေတိုးစေပါတယ်။ (၂) ငါးအဆီ ငါးအဆီမှာပါတဲ့ ပိုလီမပြည့်ဝဆီက နှလုံး၊ သွေးလှည့်ပတ်မှုနဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်စတာတွေကို...
မေး. ဦးဇင်း အသက်၄၄နှစ်ရှိပါပြီ။ ဆီးကျိတ်ရောင်ပြီး ဆီးသွားရတာ အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ အပြင်အထူးကုနဲ့လည်းပြသဖို့ ငွေမတတ်နိုင်ပါသဖြင့် သင့်တော်တဲ့ ဆေးနာမည်တွေရှိရင် ပြောပြပေးပါ။ Ashin Sanda Wuntha (FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အသက် ၄၀အရွယ်...
တွေ့တွေ့ချင်းပြုံးခြင်း လူတစ်ယောက်နဲ့စတွေ့တဲ့အချိန် သုံးစက္ကန့်လောက်အတွင်းမှာ မြင်မြင်ချင်း အထင်အမြင် ကောင်းစေဖို့ အပြုံးက အရေးကြီးပါတယ်။ အလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ လုပ်ကိုင်ခြင်း အလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားပြီး လုပ်ကိုင်တာက အောင်မြင်မှုရဲ့ သော့ချက်ပါပဲ။ အကောင်းဘက်က ရှူမြင်သုံးသပ်ခြင်း အကောင်းမြင်သဘောထားနဲ့ နေထိုင်တာကြောင့် စိတ်ကိုရွှင်ပြစေပါတယ်။ အကောင်းမြင်တာကြောင့်...
မကြာခဏ ခရီးရှည်ထွက်လေ့ရှိသော အမျိုးသားတို့ ဆီးလမ်းကြောင်း ကျန်းမာစေရန်
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ လူတွေ ခရီးသွားတော့မယ်ဆိုရင် လမ်းခရီးမှာ ဆီးသွားချင်စိတ်ဖြစ်မှာ စိုးတဲ့အတွက် ရေကို တတ်နိုင်သမျှ လျှော့သောက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ခရီးသွားတာက ပြဿနာမရှိပေမယ့် အလုပ်ကိစ္စကြောင့် မကြာခဏ ခရီးရှည် သွားနေရတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ဆီးလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နေစေဖို့...
အမျိုးသားများ ဆံပင်ကျွတ်နှုန်း လျော့ကျစေရန်နှင့် ထိပ်မပြောင်စေရန် စားသောက်သင့်သည့် အာဟာရ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) အမျိုးသားတွေမှာလည်း အခုနောက်ပိုင်း ဆံပင်ကျွတ်နှုန်းများလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသားတွေရဲ့ ဆံပင်က အသက်ကြီးလာလေလေ၊ အိုမင်းမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့် လျော့နည်းလာလေလေဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားအများစုမှာ အသက် ၅၀ကျော်လာရင် အမျိုးသားဟော်မုန်းတွေဖြစ်တဲ့ တက်စတိုစတီရုန်းနဲ့ အန်ဒရိုဂျင်ဟော်မုန်းတွေက အလိုအလျောက် လျော့နည်းသွားပါတယ်။ ဒါကို အမျိုးသားသွေးဆုံးတယ်လို့တောင်...
အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားတို့အတွက် ချစ်စိတ်တိုးစေမည့် အစာများ
၊ ကိုထက် ၊ – ကညွတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများစုက တစ်ချိန် မဟုတ် တစ်ချိန်မှာ ချစ်စိတ်တိုးစေတယ်လို့ တွေ့ရှိတတ်ပေမယ့် ကညွတ်ကိုတော့ ချစ်စိတ်တိုးစေတဲ့ အစာအဖြစ် အမြဲအသိအမှတ်ပြု လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ကညွတ်မှာ ဖောလစ်အက်စစ်ပါဝင်တဲ့ အတွက် အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးကို...
ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဖြစ်လျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည့် အကြောင်းရင်း
၊ ကိုထက် ၊ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဆိုတာ လိင်ကိစ္စအတွက်သာမက ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအတွက်လည်း အရေးပါတဲ့အတွက် လျစ်လျူရှုမထားသင့်ဘူးလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ “ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဟာ တစ်ခါတစ်ရံ နှလုံးသွေးကြောရောဂါရဲ့ အစောပိုင်းလက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ သွေးစီးဆင်းမှုထိခိုက်တဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်”လို့ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကု ဒင်နီရယ်က...
ဝှေးစေ့တစ်လုံးထဲပါရင် ကလေးရနိုင်သလား . . .
မေး။ ။ အမျိုးသားမှာ ဝှေးစေ့တစ်လုံးထဲ ပါရင် ကလေးရနိုင်ပါ့မလား။ Ye Yint Aung (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့် ဖြေကြားသည်။ မေး။ ။ ဝှေးစေ့တစ်လုံးတည်းပေမယ့် ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ဆိုရင် ကလေးရနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက တစ် လုံးက မွေးကတည်းက...
အမျိုးသားတို့တွင် အဖြစ်များသည့် ကင်ဆာငါးမျိုး၏ သတိပေးလက္ခဏာများ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အမျိုးသားတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ ကင်ဆာတွေထဲမှာ အသည်းကင်ဆာလည်း ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ အောက်ပါကင်ဆာငါးမျိုးကလည်း အမျိုးသားတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ ကင်ဆာတွေထဲမှာ ပါဝင်နေတာကြောင့် သတိပေးလက္ခဏာတွေကို သိနားလည်ပြီး လေ့လာဆန်းစစ်ကာ ဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ (၁) ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ အစောပိုင်း သတိပေးလက္ခဏာ – ယေဘုယျအားဖြင့်...
သုက်လွှတ်ရင် သုက်ရည်က သွေးရောင်ဖြစ်နေတယ် . . .
မေး. အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ သုက်လွှတ်တဲ့အခါသွေးပါတာ တစ်နည်းအားဖြင့် သုက်ရည်ဟာ သွေးရောင်မျိုးတွေဖြစ်နေတာ စိုးရိမ်ရပါသလားခင်ဗျာ။ ဘာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ။ WM (FB) ဒေါက်တာမြတ်ထွဋ်ညွန့်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. အမျိုးသားတွေမှာ သုက်ရည်အရောင်ဟာ နို့ရည်လို ခပ်ပျစ်ပျစ်ချွဲချွဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အညိုရောင် အနီရောင်ပါနေတာက သွေးပါနေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။...